﻿	ပီဇာဗုံးများ (အိမ်တွင်းပီဇာအိတ်ကပ်) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဘေကွန်ကင်ပေါ်မှာဝက်သား tenderloin ပတ်ရစ်
ကေသီရဲ့အရသာတပြင်လုံးနှေးကွေး cooker ကြက်သားချက်ပြုတ်နည်းများ
buttercream icing ကိုအပူအအေးခံရန်လိုအပ်သည်
ကျွန်တော့်ကလေးတွေဟာပီဇာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ဒါကပုံမှန်အတိုင်းပျော်စရာပဲ! ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပီဇာအိတ်ကပ်တွေလိုပဲကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့နေ့လည်စာစားပွဲမှာထပြီးအစာမစားခင်စက္ကန့် ၃၀ လောက်အပူပေးလို့ပဲ။
သငျသညျသူတို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်, ထိပ်ပေါ်မှာထားရန်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အတွင်းပိုင်းရဲ့အဘယ်အရာကိုပြောပြရန်လွယ်ကူစေသည်! ယင်းတို့အတွက်သင်ဖျက်စီးထားသောသို့မဟုတ်ကုန်တယ် Mozzarella ဒိန်ခဲကိုသုံးနိုင်သည်။
ဘီစကွတ်များကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ taco လိုခေါက်။ အနားများကိုပိတ်ထားပြီးထောင့်များကိုအောက်သို့လှည့်ပါ။ သင်ကသူတို့မုန့်ဖုတ်သောအခါအချို့ထဲမှဒိန်ခဲယိုစိမ့်မှုအနည်းငယ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊
အအေးခံစက်။ ပီဇာဆော့စ် * မုန့်ဖုတ်စာရွက် *
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁၃ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁၈ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၀ ပီဇာဗုံးများ စာရေးသူHolly Nilssonဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပီဇာအိတ်ကပ်တွေလိုပဲကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့နေ့လည်စာစားပွဲမှာထပြီးအစာမစားခင်စက္ကန့် ၃၀ လောက်အပူပေးလို့ပဲ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ Pillsbury ဘီစကွတ်၏လုပ်နိုင်တဲ့ ဘီစကွတ် ၁၀ ခု
▢၁၀ mozzarella ဒိန်ခဲ Cube ခန့် 3/4 အောင်စတစ် ဦး ချင်းစီ
▢၅ ဇွန်း ပီဇာဆော့စ်
▢၁၀-၁၅ ဇွန်း သင်အကြိုက်ဆုံးပီဇာ toppings ၏ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုကြည့်ပါ
▢ထိပ်ဖူးများအတွက်ဖျက်စီးဒိန်ခဲ & အီတလီရာသီ
အလွန်ပါးလွှာသောဘီစကွတ်မုန့်တစ်မျိုးစီကိုလှိမ့်ချပါ။ ဘီစကွတ်တစ်ခုစီအတွက်ဇွန်းငံပြာရည်ထည့်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒိန်ခဲတစ်ခွက်နှင့် ၁ မှ ၁ ½ဇွန်းအပြည့်ထည့်ပါ။
ဘီစကွတ်တွေကိုခေါက်ထားပါ။ (taco လိုမျိုး) တဝက်လောက်ခေါက်လိုက်ပြီးအနားတွေကိုပိတ်ထားပြီးဘောလုံးကိုလုပ်ဖို့ထောင့်တွေကိုအောက်မှာလှိမ့်ချလိုက်ပါ။
မီးဖိုထဲထည့်ပြီးအပူကို ၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိထားပါ။ 13-16 မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့တောက်ပသည်အထိမုန့်ဖုတ်။
သော့ချက်စာလုံးပီဇာဗုံးများ သင်တန်းအချစ် ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။ မှတ်ချက်။ ။ ဒီစာရွက်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ Spend With Pennies တွင်တွေ့ရသည်။ ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ဘေကွန် Cheeseburger ဗုံး